पोथे्र दम्सी भन्छन्
जुन 1, 2010 मा 8:02 साँझ
म आज स्तरवृद्धि… तर प्लगइन अब अनुवाद रोकिएको छ.
साथै कसरी URL traslating काम गर्छ? म केहि छ कि काम त हेर्न न रूपमा.
जुन 1, 2010 मा 8:28 साँझ
यूआरएल अनुवाद अनुवाद हो कि URL को भागहरु लिन्छ र तिनीहरूलाई फिर्ता र निस्कने अनुवाद गर्ने प्रयासहरू, जब पृष्ठ बनाएको छ निस्कने छ, सबै URL हरू आफ्नो अनुवाद गर्न प्रतिस्थापित गर्दै, र फिर्ता, एक प्रयोगकर्ता यस्तो URL अनुरोध गर्दा हो, प्लगइन प्रयोगकर्ता वास्तवमा उल्लेख जो पृष्ठ WordPress बताउँछ. तपाईं सेटिङ्गमा लागि समर्थन सक्षम गर्न आवश्यक.
प्लगइन अनुवाद रोकियो किन म जाँच गर्न पाउँदा खुसी हुनेछन्, तर म मा हेर्न केही URL आवश्यक…
रोब Davies भन्छन्
जुन 1, 2010 मा 8:06 साँझ
URL का को अनुवाद!!- म वास्तवमा useable र आज एक अनुवाद प्लगइन लागि वरिपरि देख गरिएको छ (दिन तपाईं URL अनुवाद संस्करण जारी) म आफ्नो प्लगइन पार – धेरै धेरै धन्यवाद!
यसलाई देखो छन् र यो महान काम गर्दछ – टाढा बाहिर केहि भन्दा राम्रो.
म साँच्चै यो बारेमा रुचि कुराहरू छन्:
– पृष्ठ सम्पादन मा
– अनुकूलन नेभिगेसन सेटिङ नै राख्छ
– पनि अनुवाद सबै एक एसईओ मेटा र वर्णन!
उत्कृष्ट – धन्यवाद…..
जुन 1, 2010 मा 8:29 साँझ
प्रशंसा लागि धन्यवाद… सुधार को लागि विचार सराहना हुनेछ
जुन 2, 2010 मा 6:01 साँझ
यो ठूलो प्लगइन लागि धन्यवाद. आज म नयाँ संस्करणमा यसलाई स्तरवृद्धि. यो रूपमा अपेक्षित work. तर त्यहाँ मलाई लाग्छ केही सानातिना त्रुटि हो.
मेरो वेबसाइटमा प्रयोग पूर्वनिर्धारित भाषा इन्डोनेशियाई छ. अपग्रेड पछि, यसलाई परिवर्तन गर्न प्रशासनिक पृष्ठ मा हुँदा यो फ्रन्टइन्ड मा अंग्रेजी बन्न गर्नुपर्छ.
म व्यवस्थापक पृष्ठ मा मेरो पूर्वनिर्धारित भाषा रूपमा अंग्रेजी बनाउन प्रयास गर्नुभएको र यो काम गर्दछ. त्यसपछि, इन्डोनेशियाई यसलाई फिर्ता परिवर्तन, तर आवरण पृष्ठ अझै पूर्वनिर्धारित अंग्रेजी प्रदर्शन.
म जहाँ त्रुटि ठ्याक्कै के. यो लेखन गर्दा म अझै पनि यो ट्रयाक छु. शायद यो ब्राउजर क्यास देखि आउन गर्नुपर्छ, तर म त लाग्छ छैन.
कुनै पनि मद्दत लागि धन्यवाद।.
जुन 2, 2010 मा 7:01 साँझ
म भाषा मा आफ्नो साइट देखिरहेको छु, शायद तपाईं भाषा पत्ता लगाउने सुविधा जो अंग्रेजी पृष्ठमा तपाईं पठाउँछ सक्षम छन्, युआरएल आफ्नो ठेगाना पट्टी मा परिवर्तन गरिएको छ?
जुन 2, 2010 मा 7:08 साँझ
म अब देख्न कि शायद यसको एक पूर्वनिर्धारित भाषा संग समस्या, कृपया शीर्ष गर्न Basha तान्ने प्रयास, र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ. यदि यो काम गर्दैन, म सीधा सम्पर्क छौँ
जुन 3, 2010 मा 5:46 साँझ
पहिले, म तपाईंको सहयोगको लागि धन्यवाद गर्न चाहनुहुन्छ तर आज यो मेरो वेब सूचना बिना निलम्बन गरिएको छ किनभने अब कुनै मद्दत छ. तिम्रो के बिचार छ?
छैन, म यसलाई किनभने तपाईंको प्लगइन को छ मतलब छैन, तर म किन पाहुना सर्भर व्यवस्थापक किनभने मलाई थाहा मेरो खाता म मेरो वेबसाइट मर्मत छु गर्दा निलम्बित त्यहाँ केही समस्या छन् लाग्छ, र त्यो पनि सूचना बिना छ. यो ठीक भएन, छैन यो छ?
जुन 2, 2010 मा 8:19 साँझ
यो छिटो जवाफ लागि धन्यवाद. जब म अंग्रेजी गर्न पूर्वनिर्धारित भाषा परिवर्तन यो भाषा मा अब. म भाषा सेट भने पूर्वनिर्धारित भाषा, यो पूर्वनिर्धारित रूपमा अंग्रेजी प्रदर्शन गर्नुपर्छ.
जुन 4, 2010 मा 1:36 साँझ
पोस्ट URLs को अनुवाद संग उत्कृष्ट कार्य, कि”s धेरै सजिला र एसईओ संग निकै मदत गर्नेछ. तर के पृष्ठ बारेमा? म त्रुटि प्राप्त 'पृष्ठ फेला परेन’ जब म अनुवाद गरिएको छ कि एक पृष्ठ लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, म भने जस्तै पोस्ट URLs राम्रो हो, तिनीहरूले कुनै पनि त्रुटिहरू बिना फेला भइरहेका छन्. यो किन निरन्तर छ?
जुन 4, 2010 मा 1:38 साँझ
एक अन्य कुरा, जब म 'पृष्ठ प्राप्त फेला परेन’ त्रुटि, पृष्ठ अंग्रेजी अनुवाद पूर्वनिर्धारित फिर्ता फर्काउँछ. यो आगंतुकों फेरि आफ्नो भाषा पुनचयनगर्नुहोस् गरे परेशान हुनेछ, एक ठीक महान हुनेछ. धन्यवाद
जुन 13, 2010 मा 5:19 साँझ
त्यसैले यो त्रुटि कुनै शब्द त?
जुन 14, 2010 मा 11:13 को मा
हामी यसलाई निश्चित लाग्यो 0.5.4 (यो नमस्ते उदाहरणका लागि थियो कि पृष्ठहरूमा भयो (हिन्दी लागि) thier URL मा, र यो अनुवाद भयो) यदि यो अझै पनि हुन्छ, बस हामीलाई परीक्षण गर्न को लागि एक URL साथ जवाफ.
ढिलो जवाफ छैन को लागि खेद, र godspeed
जुन 5, 2010 मा 6:45 साँझ
पद वर्णन त्रुटि: वाक्य संरचना त्रुटि, लाइन मा /home/****/public_html/starwallpaper.info/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php मा अप्रत्याशित $ अन्त 2131
IM अद्यावधिक नयाँ प्लगइन, र नयाँ टालो संग तर देखा थिए. मलाई भन यो समाधान कसरी.
जुन 6, 2010 मा 2:04 को मा
किन तिनीहरूले विजेट प्रशासनिक मा अर्डर बाहिर छन्? र म नयाँ संस्करणमा मूल अनुवाद मा परिमार्जन गर्न किन गर्न सक्छन्?
म प्रयास 0.3.4 संस्करण र तिनीहरूले प्रशासनिक मा विजेट त्यहाँ राम्रो काम गरे तर म पनि त्यहाँ अनुवाद गर्न सक्दैन.
म अर्को संस्करण आशा पहिले नै तपाईं त खुलेर यो प्राप्त गलती गर्ने.
जे भए पनि धेरै राम्रो सानो सहायक!
यो, कि गरौं सबै काम म प्रयोग गर्न पर्छ 0.5.2 छेउमा संस्करण, तर विजेट त्रुटि मा लेख्न तस्विर यो देखाउँछ रूपमा.
जुन 6, 2010 मा 12:07 साँझ
म आफ्नो पहिलो दुई प्रश्नको बुझिन, त्यसैले तिनीहरूलाई rephrase कृपया
म पनि हेर्न त्रुटि प्राप्त छैन, यो मेरो कोड मा हुन खोज्दैन, हुनत यो हुन सक्छ, यो TransPosh असक्षम हुँदा दूर जाने गर्छ?
जुन 6, 2010 मा 9:43 साँझ
मेरो अंग्रेजी थोडा कमजोर म दु: खी छु यो लागि अनुरोध.
को TransPosh त्यसपछि राम्रो सबै काम बन्द गरिएको छ भने.
मेरो पहिलो प्रश्न हो: को TransPosh सक्षम छ भने प्रशासनिक सतह मा विजेट किन काम छैन?
मेरो दोस्रो छ: किन म मा ब्रान्ड नयाँ संस्करणमा अनुवाद गर्न सक्दैन 0.5.3 यदि म प्रयोग सम्पादन अनुवाद?
म प्रयोग गर्नु पर्छ 0.5.2 becouse म यो संग अनुवाद गर्न सक्छन् संस्करण.
तर अर्डर बाहिर सक्षम पूर्वनिर्धारित भाषा अनुवाद मलाई अझै छ र कसले के Workin छैन अझै सम्म यो थाह.
यो गल्ती मेरो साथ उत्पन्न गरे मात्र?
जुन 6, 2010 मा 10:05 साँझ
म यसलाई सही यो समय मिल्यो आशा
1. हामी प्रशासनिक इन्टरफेस यसलाई सक्षम छैन, किनभने यो पनि सानो फाइदाको लागि धेरै काम हुनेछ, हामी अन्य समयको लगानी रुचि, (जुन हामीले आशा) अझ महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू छन्
2. होइन, हामी बग त्यहाँ खोजिएका अनुमान, 0.5.4 बस बाहिर छ – यो प्रयास गर्नुहोस् कृपया
जुन 6, 2010 मा 10:50 साँझ
म प्रयास 0.5.4 संस्करण तर दुर्भाग्य केही परिवर्तन भएको छ.
जुन 6, 2010 मा 10:51 साँझ
म प्रयास 0.5.4 संस्करण तर दुर्भाग्य केही परिवर्तन गर्नुपर्छ.
जुन 7, 2010 मा 7:35 को मा
यो ठूलो प्लगइन लागि धन्यवाद र मेरो खराब अंग्रेजी को लागि खेद.
म TransPosh संग एक समस्या छ: जब म एउटा पोस्ट राख्न, भाषा अनुवाद गर्दैन.
यो लिङ्क छ:
कुनै पनि मद्दत लागि धन्यवाद.
जुन 7, 2010 मा 7:48 को मा
म आफ्नो साइट काम गरिरहेको छ कि हेर्न, विभिन्न भाषा गर्न झण्डा परिवर्तन क्लिक, र अनुवाद समाप्त,
तपाईं के काम गरिरहेको छैन सन्दर्भमा थप विशिष्ट हुनु आवश्यक छ
जुन 7, 2010 मा 8:04 को मा
जवाफ लागि ofer धन्यवाद …
जब म आदेश सोध्न “सबै अनुवाद” म यसलाई पूरा गर्न सक्दैन.
जुन 7, 2010 मा 8:09 को मा
यो आदेश सुस्त छ, गुगलको सर्भर गर्न धेरै यातायात सिर्जना जोगिन गर्न. तपाईं पनि अवरुद्ध हुन सक्छ, यो एक अलग IP बाट प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, या बस प्रतीक्षा.
जुन 7, 2010 मा 8:27 को मा
म अर्को लिंक काम गरिरहेको छैन थप्न प्रयास:
म आदेश गरौं “सबै अनुवाद” सबै रात समाप्त छैन.
यो कि प्लग-मा ब्लक देखिन्छ.
प्लग-मा धेरै छिटो अघि.
जुन 7, 2010 मा 9:17 को मा
फेरि, यो लिंक काम, म एउटा भिन्न कम्प्युटरमा / ब्राउजरबाट पहुँच प्रयास सुझाव. सबै पर्खनुहुन्छ अनुवाद5प्रत्येक वाक्यांश अनुवाद बीच सेकेन्ड, तपाईं चाहनुहुन्छ भने यो छिटो जान, तपाईं कोड सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ
र विश्वास छ यदि साइट ढिलो छ, यो शायद साँचो हुनेछ, तर APC स्थापना धेरै मद्दत गर्छ
जुन 7, 2010 मा 9:54 को मा
मद्दत लागि Ofer धन्यवाद …
APC के हो?
जुन 7, 2010 मा 10:04 को मा
PHP को लागि आफ्नो एक त्वरक, र TransPosh डेटाबेस पहुँच जोगिन गर्न यो प्रयोग बनाउँछ
जुन 7, 2010 मा 1:07 साँझ
आफ्नो मदद को लागि धन्यवाद.
जुन 8, 2010 मा 1:27 साँझ
म TransPosh समस्या जारी.
उहाँले अनुवाद गर्न सक्नुहुन्न.
म कहाँ err गरे?
मद्दत को लागि धन्यवाद.
जुन 8, 2010 मा 2:00 साँझ
वा यो लिंक:
जुन 9, 2010 मा 8:33 को मा
साथै आज नै कुरा हो:
म WP प्रशासन प्यानलमा नयाँ पोस्ट थपियो 2.9.2
क्लिक “ताजा” पोस्ट भण्डारण गर्न, तर, Transposh बक्से मा संकेतक को अनुवाद बन्द छन् र सार्न छैन.
जब तपाईं प्रयोगकर्ता पक्ष बाट अनुवाद जाँच, पाठ अनुवाद भएको छैन तर मूल भाषामा रहिरहन्छ.
म अर्को ब्राउजर संग परीक्षण, तर यो नै तरिकामा व्यवहार.
यो लिंक छ:
मद्दत लागि फेरि धन्यवाद.
जुन 13, 2010 मा 6:45 साँझ
अब यो सबै काम ….
धन्यवाद फेरि बहुमूल्य मद्दत.
जुन 14, 2010 मा 7:17 को मा
माफ गर्नुहोस्, तर म फेरि ब्लक समस्या.
मा सूचक “बक्स Transposh” तिनीहरूले बन्द छन् र सार्न छैन.
म बटन क्लिक “सबै अनुवाद” र यो अनुवाद गर्न व्यवस्थित (रात भर प्रयोग).
अघि “सबै अनुवाद” वाक्य अनुवाद गरिएको थियो 197624, पछि 207311.
अब अब नयाँ पोस्ट को भाषामा अनुवाद कार्य र रोकिएको छ.
म शायद एक सानो बग लाग्छ.
अब म उसलाई पहिले जस्तो काम हेर्न आशा ….
जुन 14, 2010 मा 11:11 को मा
तपाईं टुकडे को धेरै अनुवाद छन्, शायद Google इन्जिन यो गलत बाटो देख्छन्. म एउटा भिन्न कम्प्युटरमा / IP बाट प्रयास सुझाव. यो स्रोत कोड सम्पादन गरेर प्रक्रिया छरितो बनाउन सम्भव पनि छ.
रोब Daves भन्छन्
जुन 14, 2010 मा 10:14 को मा
प्रश्न को केवल एक जोडी / सम्भव त्रुटिहरू:
– कहिलेकाहीं URL राम्ररी अनुवाद गर्दैन, त्यहाँ permalinks को untranslated पाठ टिप्न रूपमा परिवर्तन गर्न एक तरिका हो (सामान्यतया मात्र एक वा2URL मा शब्द)? म सिर्फ एक नजर थियो र म पनि समस्या शीर्षक राम्ररी अनुवाद भइरहेको छ लाग्छ (यो छ रूपमा के permalinks टिप्न छन्) त्यहाँ पोस्टिङ एक दुखाइ छ पछि permalinks परिवर्तन गर्ने शीर्षक पूर्वावलोकन एक तरिका हो. साथै कहिलेकाहीं यो श्रेणी अनुवाद doesnt.
– पृष्ठ स्रोत कोड संशोधन गर्न जसरी छ (जस्तै मेटा विवरण)
– वा फोल्डर मा कहीं भण्डारण गरिएका व्यक्तिगत पृष्ठ त्यसैले तिनीहरू त्यहाँ संशोधन गर्न सकिन्छ छन्?
जुन 14, 2010 मा 11:09 को मा
युआरएल अझै अनुवाद भएको थियो जब छैन कहिलेकाहीं छ, तपाईं पोस्ट मा अनुवाद सक्षम यदि यो बरु चाँडै हुनुपर्छ, सबै पनि काम गर्दछ अनुवाद, तर दुर्भाग्य त्यहाँ अझै पनि यो अनुवाद समाधान गर्न कुनै तरिका हो. Will be in some future 😉
एक राम्रो अतिरिक्त सिर्जना गर्न सक्छ 301 युआरएल ठीक सही छैन जब प्रतिक्रिया, तर यो एक मुश्किल प्याच हुनेछ र हामी त्यहाँ हाम्रो ऊर्जा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ छैनन्.
मेटा विवरण पनि अनुवाद भइरहेको छ, रूपमा अहिले प्लगइन गर्न सक्छन् रूपमा राम्रो. विचार एउटा आउँदै भविष्य संस्करणमा हामी इन्टरफेस सबै टुकडे भन्ने पृष्ठमा अवस्थित देखाउन सिर्जना गर्नेछौं छ, लक्ष्य समावेश.
त्यहाँ सम्पादन को लागि सर्भर मा भण्डारण कुनै पृष्ठ हो, तर तपाईं सधैं सीधा अनुवाद तालिका अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ, हुनत म यो सुझाव दिन्छौं छैन.
जुन 14, 2010 मा 11:34 को मा
आफ्नो जवाफ धन्यवाद. अन्त्यमा .html भन्ने तथ्यलाई अनुवाद गर्न अन्तिम शब्द सक्छ सकेन? साथै पछि permalinks परिवर्तन छैन अनुवाद (एउटा उदाहरण% पोस्ट% प्रयोग गरेर पछि ) म मस्यौदा फिर्ता सेट र reposted भने यो काम गर्नेछ?
TransPosh लागि पनि विजेट – यो यति everypage सजिलो नेभिगेसन लागि पृष्ठ को शीर्ष मार्फत चलिरहेको एउटा सानो हेडर रूपमा झण्डा देखा माथि हेडर रूपमा गर्न सम्भव हुनेछ?
यो पृष्ठ छैनन् भने पृष्ठ इन्जिन अनुवाद तालिका भण्डारण गरिएको छ के देख्न खोजी र पृष्ठ रूपमा यी पढ्न गर्छन्?
जुन 14, 2010 मा 11:44 को मा
धेरै प्रश्नहरू, यहाँ केही जवाफ हो:
1. हो, को .html शायद अवरोध हुनेछ
2. तिनीहरूले बित्तिकै अनुवाद तिनीहरूलाई लागि अवस्थित छ परिवर्तन, बस reposting पर्याप्त सामान्यतया राम्रो छ, तर सबै अनुवाद शायद एक राम्रो विकल्प जसरी पनि
3. म यो सम्भव छ मान, तपाईं कोड बिट tweak गर्न सक्छ
4. आफ्नो WordPress पृष्ठ पृष्ठहरु छन् रूपमा अनुवाद पृष्ठ धेरै पृष्ठहरु छन्, त्यसैले ती पृष्ठ मा एक क्रलर पेजिंग शायद एक पृष्ठ तिनीहरूलाई पृष्ठ सामान्यतया paged हुनेछ हुनेछ
जुन 29, 2010 मा 8:56 को मा
आफ्नो जवाफ धन्यवाद. केही थप जाँच गरेको र त्यहाँ एकदम थोरै छन् 404 जो जस्तो त्रुटिहरू:
(URL) /घटक / विकल्प,com_frontpage / itemId,1/मात्र,यो /
म कुनै थप्नुभयो 404 त्रुटिहरू प्लगइन र मलाई आशा छ यो काम गर्दछ.
म पनि एकदम केहि नक्कली मेटा वर्णन र शीर्षक ट्याग रही – यस राउन्ड जसरी छ?
जुन 29, 2010 मा 9:35 को मा
मेटा मुद्दा मा काम भइरहेको छ, यो पृष्ठमा अवस्थित वाक्यांश मेल खाने यदि यो पनि अनुवाद हुन्छ, भावी संस्करण यो राम्रो निपटने हुनेछ.
म प्राप्त छैन 404 त्रुटिहरु, ती हुन हुँदैन, तर तिमी मलाई साँच्चै हेर्न चाहनुहुन्छ भने म जस्तै खराब लिंक सिर्जना गर्दछ कि एक URL हेर्न आवश्यक
जुन 29, 2010 मा 11:00 को मा
404 सबै एक सेट पृष्ठमा पुनः निर्देशित छन् रूपमा पुन: निर्देशन प्लगइन चाल थियो. एक नजर छ http://www.calabria2010.com/calabria/component/option,com_weblinks/task,view/catid,922/id,21/lang,it/
एक पृष्ठ को एउटा उदाहरण सिर्जना र अब पुनः निर्देशित रूपमा.
मेटा लागि जाँदा म पहिलो प्रयोग 160 उद्धरण लागि पोस्ट को शब्द – म समस्या हुन सक्छ कहाँ छ जसले सबै मा एक एसईओ प्रयोग गर्दैछु. यो कहिलेकाहीं यो केही सामान्य छैन अनुवाद तर यो सबै.
अद्यावधिक गर्न तत्पर… धन्यवाद फेरि.
नोभेम्बर 25, 2010 मा 6:06 साँझ
नमस्ते म आफ्नो प्लगइन प्रेम, तर म एक पृष्ठ संग एक समस्या भएको छु: यो संग किसानले गरेको बजार अनुवाद ‘ युआरएल मा हस्ताक्षर, त्यसैले म त्यो सही काम देखि राख्छ लाग्छ…
तपाईं अमेरिका झण्डा मा क्लिक गरेर त्रुटि देख्न सक्नुहुन्छ (माथिल्लो दायाँ कुनामा) यो लिंक मा:
कुनै पनि विचार कसरी सक्छ म यो ठीक? सायद डाटाबेस वा TransPosh क्यास मा केहि छोएर?
नोभेम्बर 25, 2010 मा 7:03 साँझ
कसैले मेरो समस्या भर आउछ भने त, तपाईं प्रतिलिपि भित्र वाक्यांश संग एक परीक्षण पोस्ट गर्नुपर्छ, यो अनुवाद छ र यो बाहिर एपोस्ट्रोफी लिन अनुवाद ठीक, यो मूल अनुवाद पोस्ट मा URL समाधान हुनेछ. वाक्यांश गलत हुनेछ हुनत किनभने यो सही हो (किसान गरेको बजार सट्टा किसान बजार छोडेर) तर यो एउटा द्रुत तय छ.
धन्यवाद विचार Ofer लागि धेरै.